Lolli kun sirna nafxanyaa deebisuu malee olaantummaa seeraa kabachiisuu akka hin taane waan RIB godhaa jiru ragaadha. - Kichuu
HomeAfaan OromooRadioLolli kun sirna nafxanyaa deebisuu malee olaantummaa seeraa kabachiisuu akka hin taane waan RIB godhaa jiru ragaadha.
Hb. Baacaa Dabalee ABO hundaa ishee alaabaa ishee wajjiin awwaala jedhee ture,kunoo Tigiraayitti egaleera.
Ituun akkas jette
Ethiopian Diaspora Politics
Change and continuity in Ethiopian politics: A spotlight on the Somali Region – https://t.co/dXELf9vduU pic.twitter.com/NPiSSxkJ8n
— Kichuu (@kichuu24) November 15, 2020
Nobel Prize License to Kill – https://t.co/LLqTIKrGRN pic.twitter.com/x0rubeyzSk
‘Dhaloota suusii Xoophiyaan qabamu’ odoo hintaane, dhaloota araada Oromummaan qabamu horachuu feena!
Qabsoon Oromoon itti du’ee, itti ajjeefamaa ture qabsoo Oromoon miliyoonaan itti bitimaa ture qabsoo Bilisummaa Oromooti; malee, qabsoo Xoophiyaa ijaaruuf guyyaa tokkollee dhiiga buusee lubbuu bahee hinbeeku. Oromoon sabboonummaasaa dagaagfatuuf adda Bilisummaa Oromoo duuka bu’ee lubbuu isaa akka gibiraatti kaffalaa ture malee, Xoophiyaa ijaaruuf aarsaa kaffalees yaadees hinbeeku. Oromoon akka waan Xoophiyaa ijaree akkasuma akka waan Suusii Xoophiyaa qabuutti dubbachuun siyyaasaafis taatu kan jechoota akkanaatti gargaaraman fira uummatichaati jechuu matuma hindandeenyu. Firri Oromoo waa’ee Oromoo irratti Cimsee xiyyeeffata malee, qaama Oromummaa balleessuuf uumame tokko ol kaasuuf dagaagsuuf afuura hamaa afuura sheexanaa Xoophiyaa jedhu keessa hinseenu. Afuura xuraa’aa waa’ee Xoophiyaa sana keessa galanii uummata Sabboonummaa qabu gara sanatti dhiibuuf carraaquun gowwummaa irraa kan madditudha jennee ilaalaa. Oromoo gara Xoophiyaatti harkiftee gaanfa Xoophiyaan jifannaa nyaannee barbadeessine jedhanii yaaduuf abbaluun abjuun galaana daakuudha.
Abjuu Xoophiyaa jettu abjootaa bulanii, abjuu sana akkuma abjootaa bulanitti ba’anii uummatatti himuun ammoo salphinatti nama geessa. Oromoon qaama sabboonummaa kee gatiitii kan hormaan dhaadadhu! Of gati na duukaa bu’i! Jedhuuf gurra ergisuu erga dhaabee bubbulee jira. Qaama nagaa barbaadu kana nagaa dhorkachuuf waan inni hinjaallanne itti harkisuun ammoo salphinatti nama geessiti. Qaamni Oromoo falmuuf Oromoof qabsaa’u Odessa Xoophiyaa jettu lafa kaahuu danda’uu qaba. Har’a waa’ee Xoophiyaa ija dura nu qabanii yeroon akka Hoolaa gorraa’anii waadanii nu nyaatan darbeera. Uummata Hoolaa siyyaasaa goonee akka fedhu gowwomsina jedhanii tilmaamuunis isa qilleenaarratti mana ijaarranna jedhanii yaadan yoo taate malee uummata qaroomaa kana gowwomsuun hindandaa’amu. Manni Oromoo tokkoon tokkoonsaa hayyoota 2-3 qabachuu danda’eera. Mana Oromoo barataa dhabe bara kanatti arguun hindandaa’amu. Oromoon gaafa ilma barsiifate siyyaasaatti abshaalome malee gaafa barsiifate gamnoome ykn qaroome jechuukoo miti. Oromoon gamamaa ganamtee qaroomaadha. Abshaalummaa siyyaasaa horachuuf ammoo ilmaan isaa gaafa barsiifate milkoome jenne.
Araddaa Oromoo abiddaan gollobaa nagaa uummataa lallabuun if sobuu malee uummata sobuu miti. Uummata sobanii jiraachuun ka yeroo ta’uun ala fiixa bahinsaaf nama hindandeessistu. Abshaalomnee jirra gaafa jennu wantoota isin gochaa jirtaniif gochuu jirtam akka karoorsitanitti waan bira gahaa jirruufi. Nagaa keenya utuu hinkabachiisin biyyattii keessatti afuura Xoophiyaa jettu lallabaa jiraanna jedhanii tilmaamuunis of gowwomsuu taati.